USGQEMEZA UMISIWE OKHOZINI FM - Ilanga News
Home Izindaba USGQEMEZA UMISIWE OKHOZINI FM
USGQEMEZA UMISIWE OKHOZINI FM
UMISIWE emsakazweni uKhozi FM uSipho “Sgqemeza” Mbatha nophrojusa ababili bohlelo lwakhe, uMandla “Njinji” Magwaza noBabheke Mthethwa
KUSOLWA ukudicilela phansi igama lomsakazo ohlonishwayo, Ukhozi FM, njengezinye zezizathu ezenze izikhulu kulesi siteshi zikhethe ukumisa izinsuku eziwu-30, uSipho ‘DJ Sgqemeza’ Mbatha. Umiswe nozakwabo ababili abangoprojusa, uMandla ‘Njinji’ Magwaza noBabheke Mthethwa. USqemeza ushayela uhlelo lwasekuseni ngokubambisana noNonhlanhla Mroza Buthelezi. Izolo ekuseni inhlangano yezokusakaza i-SABC, ikhiphe isitatimende ngokumiswa kwalaba abathathu, kodwa kwangacaciswa ukuthi bamiselweni. Kunalokho isitatimende sivele sathi kakukho okunye okuzovezwa ngokumiswa kwabo.
ILANGA licoshe ngemithombo yalo ukuthi laba abanye bafakwe obishini nguyena uDJ Sgemeza, okuze kwaholela ekutheni bamiswe isonto umuntu ngamunye. Kuthiwa ukumiswa kukaDJ Sgemeza kulandela ukungalihloniphi igama lesiteshi asisebenzelayo, uKhozi FM, okuthiwa sekunezikhathi eziningi elithela ngodaka. Phakathi kwezigameko ezibalwayo kuthiwa yimali eyisizumbulu esithile okuthiwa uyikweleta umnyango thizeni kahulumeni, okuthiwa akafuni ukuyikhokha.
Kuphinde kuvele ukuthi udaba obelubikwa yileli phephandaba, ngomdonsiswano obewukhona phakathi kwalo msakazi nenyanga yakwaMhlabuyalingana, uMnu Zola Mthembu, abebebangisana naye imali engango- R25 000 ayemkhokhele wona emqashela ukuba azobamba uhlelo emshadweni wakhe, nalo lube nomthelela. Kuzokhumbuleka ukuthi le nyanga yaze yahambela ezindlini zokusakaza iyogasela lo msakazi, ithi ifuna akhokhe imali yayo emkhokhele yona ngonyaka odlule. Le nyanga beyikhala ngokuthi igasele ezindlini zokusakaza nje, yingoba uSgemeza imazela emsakazweni.
Ngesikhathi ILANGA libika ngalolu daba, abakhulumela i-SABC, bathi basazophenya ngokuhlaselwa kwakhe emsebenzini yile nyanga izobasela isikweletu sayo. “Kuningi abhekene nakho, kodwa okuningi kakhulu asolwa ngakho wukungalihloniphi igama lalo msakazo oyisikhondlakhondla,” kusho umthombo. Esikhundleni sika-DJ Sgqemeza kubanjiswe uSiyabonga Mhlongo ozolushayela ngokubambisana noMroza uhlelo. Isitatimende esikhishwe wuphiko lwezokuxhumana e-SABC, siveze ukuthi laba bamisiwe kulandela ukuphenya okwenziwayo
“Abaphathi besiteshi bazisa abalaleli babo ngokumiswa kwamalungu amathathu ohlelo lwasekuseni ngokungabi khona kwabo ohlelweni ngenxa yophenyo okumele lwenzeke ngaphakathi. “Kwabamisiwe ngumsakazi nophrojusa ababili balolu hlelo,” kusho isitatimende esiphume izolo ngoLwesithathu ekuseni. Siqhuba sithi kakukho okungale kwalokho abaphathi abazimisele ngokukukhuluma ngoba kuyobe sekuphakathi kukamqashi nomqashwa. Sibe sesiqinisekisa ukuthi ikhona imizamo yokuvala izikhala.
Previous articleUkufanisa nesibusiso ukucula noDeborah
Next articleIkhehla (82) “lidubule labulala umzukulu”